စက်တင်ဘာလ 2021 – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Monthly Archives: စက်တင်ဘာလ 2021
Sky Rolling Ball 3D – လှိုင်သာယာ&Hack
သင်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုနှစ်သက်။ Sky Rolling Ball 3D ကိုကျွမ်းကျင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ပါ! ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောအခက်အခဲများကိုကျော်ဖြတ်ကာလျင်မြန်သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချိန်များကုန်ဆုံးနေသည်! လိပ်, လှည့်, ခုန်, ဒါပေမယ့်လဲကျပြီးကိုယ့်ဘဝကိုမဆုံးရှုံးလိုက်ပါနဲ့! ၎င်းသည်စိတ္တဇလောကတွင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အားမလျှော့တဲ့ရူပဗေဒနဲ့!သင်အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်လိမ့်မည် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): BALL, မင်္ဂလာပါ, Rolling, Sky
နောက်ဆုံး Gear – လှိုင်သာယာ&Hack
နောက်ဆုံး Gear, ပါဝင်သောမဟာဗျူဟာမြောက် RPG ဂိမ်းသစ် “Mechs များ & အပျိုများ”, မကြာမီလာတော့မည်!မင်းရဲ့ mech တွေကိုမင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပြန်ပြင်ပါ, ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး၏လှပသောလေယာဉ်မှူးများကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် mech တိုက်ပွဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ!အစွမ်းထက် Mech များပါဝင်သောခရီး & ချစ်စရာကောင်းတဲ့လေယာဉ်မှူးများစတင်ပါတော့မည်! ခေါင်းဆောင်, ငါတို့အချင်းချင်းတိုက်ကြစို့! ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များ:[မင်းရဲ့ mech တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုပြင်ပါ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, FINAL, Gear
Unicycles ပေါ်တွင် Unicorns – လှိုင်သာယာ&Hack
unicorns ကိုတီးခတ်သောဤ wacky နှင့်ချိုမြိန်သောရူပဗေဒမောင်းနှင်သည့် rainbowcore တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတွင်သင်၏ ဦး ချိုများကိုဓားများအဖြစ်သို့ပြောင်းပါ။. သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်ဘီးကိုဟန်ချက်ထိန်းနေစဉ်များစွာသောထူးခြားသောအဆင့်များရှိအခြားအရောင်အသွေးစုံကြံ့များနှင့်တိုက်ပါ. မင်းရဲ့ ဦး ချိုကိုထက်ထက်ထားပြီးသွေးထွက်သံယိုအတွက်အသင့်ပြင်လိုက်ပါ, ဒဏ္icalာရီလာသက်တံ့ပြပွဲ! ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များ:•အဆင့်နှစ်ဆင့်မရှိသည့်ဘက်စုံသုံးကစားသူတစ်ယောက်တည်းစွန့်စားမှု… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Unicorns, Unicycles
မင်းဟာနည်းဗျူဟာဂိမ်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့မာစတာတစ်ယောက်ပါ? မင်းရဲ့ပညာရှိနည်းပရိယာယ်တွေကိုရှင်သန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုတိုက်ပါ. သင်၏အားကြီးသောသူရဲကောင်းများကို ဦး ဆောင်ပြီးအမှောင်ထုမှသင်၏နယ်ပယ်နယ်နိမိတ်ကိုခုခံကာကွယ်ပါ! မင်းကစစ်မှန်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်သမားတစ်ယောက်ဆိုရင်အောင်ပွဲခံမယ်၊ ကျော်ကြားမှုရဖို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာသန်းပေါင်းများစွာသောကစားသမားတွေနဲ့နည်းဗျူဟာဂိမ်းကို ၀ င်ပါ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ »
မိစ္ဆာများကြောင့်မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်! သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြောက်စရာကောင်းသောလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ! သင်ကြောက်စရာကောင်းသောမိကျောင်းများနှင့်ပြည့်နေသောစွန့်စားခန်းတစ်ခု ၀ င်ရန်သင်သတ္တိရှိသလော?Idle Creepy Park Inc မှ. ပျင်းရိသောကစားသမားအားလုံးအတွက်ကြောက်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်! ကြောက်စရာကောင်းသောမိကျောင်းများနှင့်အစွဲအလမ်းထိတ်လန့်စရာအိမ်ကိုစူးစမ်းခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်စွန့်စားမှုတစ်ခုမဟုတ်သည်မှာသေချာသည်. သင် .. လုပ်ရမည်… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
Midsomer လူသတ်မှု: စကားလုံးများ, မှုခင်း & လျှို့ဝှက်ချက်များ Cheats&Hack
မင်းရဲ့မှန်ဘီလူးကိုဖမ်းပြီးဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် crossword puzzle game မှာအပြင်းအထန်သတ်နေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကူညီဖြေရှင်းပေးပါ! Midsomer ကောင်တီ: cottages များချစ်စရာနေရာတစ်ခု, စိုက်ခင်း, သစ်တောများနှင့်စမ်းချောင်းများသည်တိတ်ဆိတ်မှုကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည်, သာယာအေးချမ်းသောဘဝ. ဒါတောင်အရူးမလုပ်ပါနဲ့… Midsomer သည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအန္တရာယ်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်, နေရာတိုင်းမှာလူသတ်မှုတွေနဲ့ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, မှုခင်း, Midsomer, Murders, Mystery, စကားလုံးများ
အကပြိုင်ပွဲ – လှိုင်သာယာ&Hack
ဂီတကိုခံစားချင်ပေမယ့်နည်းလမ်းဟောင်းကပျင်းစရာကောင်းလွန်းသည်? Dancing Race တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ, အံ့သြဖွယ်ပျော်စရာဂီတဖက်ရှင်လမ်းလျှောက်ဂိမ်း! သီချင်းသံနှင့်အတူဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားနိုင်သည်. Dancing Race တွင်သာ! ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တစ်ရံကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာစေရန်တတ်နိုင်သမျှဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များစုဆောင်းပါ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Dancing, တွေ့ပါတယ်။
Geniuses များ & ကျောက်မျက်ရတနာများ – မီးခြစ်3ဂိမ်း Cheats&Hack
သူခိုးများသည်နန်းတော်မှရတနာများကိုခိုးယူခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားပြန်လည်ရယူရန်စွမ်းအားရှိသောသူတစ် ဦး သာရှိသည်! Genie the Jenni နှင့်သူမ၏အဖော်တို့နှင့်အတူဆန်းကြယ်သောကမ္ဘာများကိုဖြတ်သန်းပါ, Fox မှ Trix, နန်းတော်ရဲ့ဥစ္စာဓနတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူခိုးတွေကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့. လဲလှယ်ပါ, ကိုက်ညီ, နှင့်ကျောက်မျက်များကိုချေမှုန်းပစ်ပါ, ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များကိုပြန်လည်ရယူပါ, နှင့်… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, ကျောက်မျက်ရတနာများ, Geniuses များ, မီးခြစ်
Grim Soul လား: Dark Survival RPG Cheat များ&Hack
ကျော်လွန် 25 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဒေါင်းလုပ်သန်းပေါင်းများစွာ! Grim Soul သည်အခမဲ့ကစားနိုင်သောအမှောင်စိတ်ကူးယဉ်ရှင်သန်မှု MMORPG ဖြစ်သည်. တစ်ချိန်ကသာယာဝပြောသောဧကရာဇ်ပြည်နယ်, Plaguelands များသည်ယခုအခါကြောက်ရွံ့မှုနှင့်အမှောင်ထုတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. ၎င်း၏နေထိုင်သူများသည်အတောမသတ်နိုင်သောဝိညာဉ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားကြသည်. မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့မြေမှာမင်းရှိနေသရွေ့ရှင်သန်ဖို့ဘဲ. အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းပါ, ခံတပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ, ကာကွယ် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Dark, Grim, RPG, Soul, ရှင်သန်မှု
သံမဏိတောင်တန်းများ – လှိုင်သာယာ&Hack
သံမဏိတောင်တန်းများသည်အလွန်စွဲလမ်းဖွယ်ကောင်းသောရူပဗေဒအခြေခံတင့်ကားအက်ရှင်ဂိမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်! ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်! တောင်ကုန်းများကို ဖြတ်၍ သင်၏လမ်းကိုပြိုင်ပြီးသင်၏ရန်သူများကိုသံမဏိဖြင့်ချေမှုန်းပါ. သင်၏ကျဆုံးသွားသောရန်သူများထံမှခိုးယူစုဆောင်းပြီးသင်တွေ့နိုင်သောအကောင်းဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့်အထူးလက်နက်များဖြင့်သင်၏ယာဉ်များကိုမြှင့်တင်ပါ. Unlock လုပ်ပါ new customizable tanks and brawl your… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Hills, Steel